तपाईलाई थाहा छ ? यसकारण घट्दैछ सेयर बजार ! - Arthatantra.com
तपाईलाई थाहा छ ? यसकारण घट्दैछ सेयर बजार !
सर्वाधिक उच्च अकंमा पुगेको नेप्से परिसुचकमा एकाएक ब्रेक लागेको जस्तो अनुभुति हुदै छ । १०३० को उच्च बिन्दुबाट बिना ब्रेक १८८० सम्मको सर्बाधिक उच्च अंक सम्मनिरन्तर पुगेको बजारमा १०० अकंको गिरावट सामान्य होइन भन्ने ठाउँ छैन ।
अर्थतन्त्रको ऐना स्वरुप प्रतिबिम्बित हुनु पर्ने नेप्से एकोहोरो लयमा हिँडेको निश्चय हो । तर समग्रमा सबै सुचकहरुले त्यही लयलाई पच्छ्याएको भने पक्कै होइन । बैकिङ्ग क्षेत्र भने त्यसबाट अछुतो नै छ भन्दा फरक नपर्ला अन्य क्षेत्रको तुलनामा । यद्यपी यो आरोप शतप्रतिशत सहि भने होइन । किनभने भूकम्प र नाकाबन्दीको मारमा थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्र लगानी योग्य क्षेत्रको अभावमा भौतारी रहँदा पूँजीबजारले यसलाइ पार्किड्ग गर्न सहज बनाईदिएको भने पक्कै हो । फलस्वरुप साविकको भन्दा केही बढी पूँजी एकाएक बजारमा प्रवेश ग¥यो ।
यसको साथै पूँजी वृद्घि र हकप्रद सेयर, वोनस सेयरका कारण बैंककका सेयर मूल्य बढ्नु प्राकृतिक रहे पनि इन्सुरेन्स र लघुवित्तका सेयरहरुमा भने पूर्ण रुपमा हचुवा प्रवृति हावी रहेको देखिन्छ । पूँजी र कुल सेयर संख्याको आधारमा त्यस क्षेत्रका प्रति सेयर आम्दानी तुलानात्मक रुपमा केही बढी देखिनु मात्रको आधारमा लगानीकर्ताहरु हौसियको देखियो । तसर्थ अप्राकृतिक रुपमा बढेका ती सेयरका मूल्यहरु वाहेक अन्य सेयरका लगानीकर्ताहरु निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था नभए पनि निरास भए ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु प्रष्ट हुनु जरुरी छ, सेयरका अंकहरु निरन्तर बढ्ने वा घट्ने हुँदैन । बजार आफ्नो गतिमा निरन्तर चलिरहन्छ । तर सधै बढ्ने वा घट्ने कदापी हँुदैन । तसर्थ यस्ता चालहरुलाई कसैले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्दैन । बजारमा सुनिए जस्तो ठूला लगानीकर्ताहरुले म्यानुपुलेशन गरे भन्नु नितान्त बेकार कुरो हो ।
२ अर्ब बराबरको दैनिक कारोवार हुने बजारलाई म्यानुपुलेशन गर्न केही ठूला लगानीकर्ताबाट सम्भव नरहला । तथापी भित्री सूचनाको हकमा भने केही त्यस्ता ठूला लगानीकर्ताहरु अग्र स्थानमा छन् भन्दा अन्यथा नहोला । सबैलाई थाहै छ, नेप्से २३२ अंक बाट १०३० अंकसम्म आउन धेरै पटक उतार चढाव पार गरेर आएको हो । तसर्थ १०३० देखि १८८० सम्मको यात्रामा पनि यस्ता आरोह अवरोह आउनु प्राकृतिक नियम नै हो । उच्च अंकमा पुगेको नेप्से १०० अंक हाराहारीमा घट्नु स्वभाविक नै हो । यस पटकको गिरावटलाई प्यानिक प्रफिट बुकिङ्गको संज्ञा दिँदा उत्तम हुन्छ । उच्चतम अंकमा नेप्से पुग्दा लगानी सुरक्षित गर्न नसकेका लगानीकर्ताहरु केही आधारभुत समाचारको आधारमा घटेको बजारमा आत्तिएर धेरैजसो लगानीकर्ताहरुले एकै चोटी सुरक्षित गर्न खोज्दा बजारमा थप गिरावट आएको हुन सक्छ ।
तसर्थ थप सय अंकको गिरावट सम्मलगानीकर्ताहरु आत्तिनु पर्ने अवस्था बजारमा छैन । तर अर्थमन्त्रीले आशा जगाउने खालको मन्तब्य दिएको पृष्ठभूमिमा बजार केही उकालो लाग्न थालेको छ । पूँजीबजारको अनुशासन अनुरुप आफूलाई ढालेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु यस पटक निकै उत्साहित भएको देखिन्छ । लोभले सधै अन्धकारको गल्ली पछ्याउँछ भने जस्तै सेयर बजारमा लोभ हावी भएमा मनोवैज्ञानिक रुपमा नाफा सुरक्षित गर्न प्रोत्साहन गदैन ।
अतः यस्तै किसिमको अत्यास लगानीकर्ताहरुमा आउँछ । अन्त्यमा बजार जुन रुपमा बढेको थियो, त्यही रुपमा घट्न सक्ने आधारहरु प्रष्ट छ । निसन्देह नितान्त अधिक तरलताको कारण बढेको बजारमा प्यानिक प्रफिट बुकिङ्ग हुनु स्वभाविक हो ।
निरब पुडासैनी, २३ साउन २०७३, ११।००
वि.सं.२०७३ साउन २३ आइतवार १२:३८ मा प्रकाशित
अघिल्लाे कपडा उद्योगमा आगलागी, ८० लाख बराबरको क्षति !
पछिल्लाे अबदेखि चारपांग्रे गाडी सडकमा पार्किङ गर्न नपाइने !
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्यो महंगी
वि.सं.२०७८ असोज ७ बिहीवार १६:११
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिती...